5 SIYAABOOD OO UU CAABUQU SI SAHLAN UGU FIDI KARO – WARSOOR
Caabuqu waxa uu ku kordhaa 5 siyaabood , taas oo qofka u sahasha in uu sifudud uu xanuun u qaadi karo .
calaamadaha lagu garto in caabuq dhaliye uusoo galay waxa ka mid ah:-
5-TAN SIYAABOOD AYAA SI SAHLAN KUUGU KEENI KARA CAABUQ.
1.GACMO AAN NADIIF AHAYN OO AAD KU TAABATO SANKA ,AFKA IYO INDHAHA.
Jeermisku wuxuu ku faafi karaa gacmaha hindhisada, qufaca, ama xoqidda indhaha ka dibna waxaa loo gudbin karaa xubnaha qoyska ama asxaabta kale. Gacmaha oo kaliya oo aad dhaqdo ayaa kaa caawin karta ka hortagga cudurrada sida hargabka ama caabuqa indhaha.
2.GACMO DHAQIS LA’AAN CUNTADA KAHOR.
Caadi ahaan jeermisku waxa uu ka gudbiyaa gacmaha aan nadiifka ahayn oo uu cuntada u gudbiyaa diyaariye cunto buka oo aan maydhin gacmihiisa ama gacmaheeda kadib marka uu isticmaalo musqusha. Jeermiska ayaa markaa u gudbiya kuwa cuna cuntada. Tan waxaa si fudud looga hortagayaa in had iyo jeer gacmaha la dhaqo ka dib markaad musqusha isticmaasho iyo ka hor intaadan diyaarin alaabta cuntada.
3. CUNTADA QAYRIN.
Jeermisku waxa uu ka soo qaadaa cuntooyinka cayriin, sida digaagga, gacmaha marka cuntada la diyaarinayo. Jeermiska gacmaha ayaa markaa loo gudbiyaa cuntooyinka kale ee aan la karinin, sida saladh. Karinta cuntada ceeriin waxay dishaa jeermiska bilowga ah, laakiin saladku weli wuu wasakhaysan yahay.
4.ILMAHA XANUUNSAN IYO ILMAAHA CAAFIMAAKA QABA .
Jeermisku waxa uu u gudbiyaa ilmaha shuban qaba gacmaha waalidka marka xafaayadda la beddelayo. Haddii waalidku aanu isla markiiba dhaqin gacmihiisa ama gacmaheeda, jeermiska keena shubanka ayaa markaa u gudbiya kuwa kale.
5. DADKA IYO XAYAWAANKA.
Gacmahaaga dhaq ka dib markaad xayawaanka rabtid ama taabato meel kasta oo ay la kulmaan.
DR. Maxamed Ibrahim(Alfanuki)